त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रहरु (योगेन्द्र बुढा) « Jaitoon Online
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रहरु (योगेन्द्र बुढा)
पर्यटनको सम्भाबना धेरै रहेको त्रिपूरा सुन्दरी नगरपालिका
यस मन्दिरबाट देखिने नागबेली आकारको ठुलो भेरी नदी,मन्दिरको पारीपट्टी देखिने हिँउले सिँगारिएका मुकुटेश्वर हिमाल लगायतका प्रशिद्ध हिमाल,आँखैमा टाँसीएजस्तो देखिने सोत्तर उम्रेका उराठ नाङ्गा डाँडापाखा बिशाल उब्जाउयोग्य फाँट मन्दिरको बाहिरी आकर्षणका केन्द्रबिन्दुहुन ।मन्दिर पुगेपछि देखिने यस्ता दृष्यहरुले मन्दिर पुग्ने जो कोहीको पनि मन लोभिने गर्दछ ।
वाला त्रिपूरा सुन्दरी मन्दीर
इं.स. १३५३ तिर मौरे देखि उताको क्षेत्रमा रहेका बुराल देवता को पुजाआजा गर्न तथा दर्शनभेट गर्नको लागी डोल्पाका भोटान क्षेत्रका भक्तजनहरु उक्त क्षेत्रमा जाने प्रचलन थियो । एक समय बाहुन पुजारी बुराल देवताको दर्शन गर्न जाने क्रममा मौरे जलजला भन्ने स्थानमा हिँउको कारण बाहुनको मृत्यू भए पश्चात बुराल देवता आफै डोल्पामा स्थापित हुने चाहना अनुरुप डोल्पाको काँडा तालीमा बुराल देवताको स्थापना भयो । उक्त समय शक्ति पीठको स्थापना भएकाले भक्तजनहरुले तामा, धान लगायतको सम्पति चढाउदा तथा खशीबोका चढाउदा बुराल देवताकोमा सम्पतिको जम्मा भयो । उक्त समयमा बुराल धामीको पत्निले एक दिन राता पहेला कपडाले तथा मासुको गन्धले धेरै दिक्क भएको कुरा राख्दा धामी र डाँग्रे बिच विवाद उत्पन्न हुँदा धामीले तामाको भाडा रोलागाडमा राखेर खोला सुकाउने तथा डाँग्रेले चिनु खोलामा राखेर रोलागाड थुन्ने भन्ने वातविवाद चल्दा धामीलाई केही असहज भयो ।
यहि क्रममा धामी र डाँग्रे जुफालको लागि यात्रा गर्ने क्रममा डाँगिबाडा पुगेर फर्कने क्र्रममा सुधा लाग्नाको फेदमा साँझ परेछ । उक्त समयमा जाग्ना को लाईन (भारी बोकेका खसीहरुको लाईन) बाट उज्यालो प्रकाश बलेको र जाग्नाको अगाडी पछाडी कुनै हेरालो नभएको देखेर दुबैजना बेहोस भएछन् । जाग्नाको अन्तिममा रहेको खसीलाई चोट लागेको र केही कमजोर देखेर धामीले होस खुलेपछि अचम्म मान्दै कसको रहेछ भनेर उक्त खसीलाई समातेछन् । सो समयमा अचानक धामीको बुरालको मन्दिरबाट एउटा कडी भएको र एउटा नभएको तामाको भाडा मन्दिरबाट बाहिर निस्कियो । धामी सम्पतिको नाश भयो भनेर मुर्छा परे भने जाग्ना डाँगिबाडा हुँदै मोतिपुरको पुल तरेर रुपको जंगलमा गएर हराए । यसको मतलब काँडातालीमा रहेको बुरालको सम्पत्ति रुपमा गएर बस्यो ।
त्यस पश्चात बुरालले मान्छेको भेषमा रहका पुजारीलाई एक दिन म औशी या पूर्णिमाको दिन आउछु नडराउनु भनेछन् । त्यसपश्चात औशी पूर्णिमाको दिन पुजारी धुप बत्ति बालेर मन्दिर भित्र जाँदा एक दिन बाबाजी बसिरहेको देखेछन् । पुजारीले बाबाजी बसेको देखेर डराए र भाग्दा बुरालको रहमा स्थापना हुन सकेन् । हाल रहमा बुराल बसेको ढुँगा, मुर्ति देख्न सकिन्छ । त्यस पश्चात बुराल कहाँ स्थापना हुने सोचेर पाहाडा तिर लाग्ने क्रममा पातिहाल्नाको चैत्री बिसाउने स्थानमा गएर बसेर अध्ययन गरेर हेर्ने क्रममा हाल छलको पहिलो धामी गाई चराउदै ढुँगा माथि बसेर मुरली बचाउदै गीत गाएको देखेछन् (दामे मोहोरीको भतिज जुन समयमा उ टुहुरो हुनुहुन्थ्यो र भोको गरीब भएर काकाको गाई चराउने काम गर्दथ्यो) ।
उक्त समयमा बुरालले भैरवी गंगा, तामाश्राी गंगा, शक्ति पीठ बाला त्रिपुरासुन्दरी, मुकुटेश्वर हिमाल, तेलकुण्ड, दुधकुण्ड, मुटेचुला हिमाल, कोली बगरको बिचमा टल रातामाटा भन्ने स्थान देख्यो र उक्त स्थानमा बस्ने बिचार गर्यो । एक दिन पुन बुरालले रहकै जस्तो गरेर छलको मान्छेलाई म एक दिन आकाशबाट झर्नेछु चनाखो हुनु भनेर जानकारी दिएछन् । एक दिन मध्यरातमा सबैजना सुतेको बेला एक्कासी छल माथिको मुकुटेश्वर हिमालको आकाशबाट घण्टी बज्दै बत्ति बलेर तारा खसेझै तल झदै छलको हालको मुल थानमा झरेछ । उक्त समयमा रञ्जनाले थाँहा पाएर धुप बत्ति बालेर पुजा गरीसकेपश्चात हालको छल मष्टा भवानी ताँहा स्थापना भएको मानिन्छ । हाल सम्म शक्तिशाली र मान्दै आएको शक्तिपीठ मा विभिन्न जिल्लाका भक्तजनहरु समेत दर्शन गर्न आउने गर्दछन् ।
छल मष्टा मन्दीर त्रिपूरा सुन्दरी नगरपालिका डोल्पा
यस क्षेत्रमा सिमसार ताल पनि रहेको र उक्त स्थानमा राजाको परिवारले धानखेती गर्ने प्रचलन रहेको थियो ।
धान खेती गर्ने क्रममा हरेक बर्ष मानव बली चढाउनुपर्ने परम्परा अनुसार एक दिन काँडातालीको बाबु र छोरा मात्र भएको परिवारमा परेछ । त्यस समय बलीमा को जाने भनेर बाबु र छोरा बिच ठुलो बहस भएछ । बाबुले छोरा म बुढो भए म बली चढ्छु भन्दा छोराले जन्म दिने बाबु भन्दा म बली चढ्दा राम्रो भनेछ त्यसै गरी विवाद चलिरहदा बाबु र छोरा रल्लीको राजारानी क्षेत्रमा आउदै रहेछन् । धान रोप्नको लागि सबै तयारी अबस्थामा रहेको र बलीका लागि समय पर्खेको अबश्थामा बाबु र छोरा विवाद गर्दै बली चढाउने समय भन्दा केही ढिला पुगेछन् । समय कटेपछि धान रोपण गर्न तयार भएका रोपाहाहरु, हलि, गोरु सबै उक्त सिममा एक्कासी डुबेछन् । उक्त समय देखि मानव बली चढाउने प्रथाको अन्त्य संगै राजारानीको पनि अन्त्य भएको भन्ने ईतिहास रहेको छ ।
को करेलीकाँडा माथिको मुकुटेश्वर हिमाल नजिकैको डाँडामा बाईसे चौबीसे राजाको रुपमा रहेका बिक्रम शाही महाराजाको दरबार रहेको छ । हाल दरबारको भग्नाबशेषहरु सुरक्षित रुपमा रहेका छन् । धार्मिक हिसाबमा पनि महत्व बोकेकोले तिर्थालुहरु यस क्षेत्रमा जाने भएकाले हाल सो क्षेत्रमा धर्मशाला पनि निर्माण गरीएको छ । राजा विक्रम शाही एक तपश्वि र धार्मिक राजाको रुपले परिचित रहेका थिए । इ.स. १११४ तिर बिक्रम शाही महाराजा हालको दरबार क्षेत्रबाट हरेक दिन बिहान त्रिपुरासुन्दरीको त्रिवेणी नदीमा स्नान गरेर माता बाला त्रिपुरासुन्दरी भगवतीको दर्शन गरी हालको खौलामा रहेको उहाँको गद्दीमा आरामा गरे पुन दरबार क्षेत्रमा फर्कने गर्दथे । त्रिपुरासुन्दरीमा राजाले पुजा गर्दा बिरे भन्ने दमाहाले दमाहा बजाउने गर्दथ्यो । राजा त्यतिबेला सुरक्षित स्थानमा बसेर कसैबाट आक्रमण नहोस भन्ने हिसाबले उक्त डाँडामा बस्ने गरेको भनाई छ । साथै त्यति बेला जति अग्लो स्थानमा बस्यो त्यति शक्तिशाली हुने भन्ने मान्यताले पनि राजा उक्त स्थानमा बसेका थिए । ७ औ सताब्धीमा यो दरबार त्रिपुराकोटको गद्दीमा भएको भनाई रहेको छ ।
बिक्रम शाहीे त्रिपुराकोटमा १४ घर बिष्टका परिवारलाई आफ्नो काजीको रुप्मा राखेका थिए । भगवती मन्दिर पछाडी बिक्रम शाहीको पहिलो दरबार थियो । त्यस दरबार क्षेत्र भित्र धान कुट्ने ढुँगाको ठूलो ओखल रहेको थियो । त्यसै क्षेत्रमा एउटा बेरुको रुख पनि थियो र हाल पनि रहेको छ । बिक्रम शाहीले वेरुको फूल फूले पछि आफैले टिपेर भगवतीलाई चढाउने गर्दथे । राजाको खानाका लागि उक्त ओखलमा काजीनीहरु धान कुट्ने गर्दथे ।
प्राकृतिक सुन्दरताको खानी त्रिपूरा सुन्दरी नगरपालिका क्षेत्र
मुकुटेश्वर हिमाल क्षेत्र
योगेन्द्र बुढा (डोल्पा सर्वाङ्गिन बिकास समाज)